Yuusuf Garaad Oo Farriin Culus U Diray Madax Goboleedyada Ku Shiraya Magaalada Nairobi | Caroog News
Yuusuf Garaad Oo Farriin Culus U Diray Madax Goboleedyada Ku Shiraya Magaalada Nairobi
Waa farriin ku socota Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyada ku shiraya Nairobi. Mudanayaal, Madaxweynayaal, iga hooya salaan Soomaalinnimo, salaan saaxiitinnimo oo Muqdisho ka timid oo aan khadka idiin soo marinayo.
Waxaan qiyaasayaa Ramadan iyo waddac ka dib in aad quraac wanaagsan qaadateen, qadaduna ay idiin soo carfeyso. Allah ha idiin daaweeyo. Waan ku kalsoon ahay in aad maanka ku haysaan in aad u maqan tihiin Soomaali qaarkood badani aanuu labada midna haysan. Walaalayaal waan jeclaa in shirkuunnu uu ku qabsoomo dalka gudihiisa. Waxaan ku kalsoonahay in aad idinkuna sidaa jecleydeen. Ma dhicin. Sababta idinka ayaa iga og.
Federaalku marka uu ka habaabo waddada, kana xishoon waayo xadgudubka noocaas ah, intii uu jiho khalad ah u xawaareyn lahaa waan qabaa in la joojiyo.
Isla mar ahaantaas, waxaan qabaa in Dowladda lala shaqeeyo. Waliba hadda oo awood-yari, culeys badan oo gudaha ah iyo culeys ay Dowlado na saareen intuba ay Soomaaliya ku goobteen, waxaan qabaa in aan la wiiqin Dowladda ee garab iyo gaashaan loo noqdo.
Muqdisho marti kama tihiin. Waa caasimaddiinna. Waxaan qabaa in aad timaaddaan, Madaxweynaha iyo Madaxda kalena aad la gorgortantaan.
Ma fududa. Laakiin yaa yiri arrimaha Soomaaliya ayaa fudud? Yaa yiri sida dal dib loogu dhiso ayaa fudud?
Mar kasta oo ay sii dheeraato muddada la kala maqan yahay, wakhtiga doorashada ka dhimmani isaga oo aan ka warqabin khilaafka uu ku xawaareynayo hoos-u-tiris aan la hakin karin, kala fogaashuhu wuu sii qoto dheeraanayaa, wuuna sii xoogeysan doonaa. Labada dhinac ee khilaafku u dhexeeyo, wuxuu mid waliba ku go’aan qaadan doonaa tuhun, xumo-filasho, baqdin iyo yaan lagu gaadin.
Madaxweynow, intaas midkoodna ma aha waxa ay kaa sugayaan dadka ku doortay.
Fool-ka-fool in loo wadahadlo waxay keeni kartaa isu soo dhowaasho iyo in xal la gaaro. Waan ogahay Garowe ayaad isku daydeen in is-af-garad la gaaro. Laakiin inta khilaafku uu taagan yahay, wakhtiguna xawaareynayo, ma ahan in laga quusto is arag iyo wadahadal oo ah dariiqa keliya ee idiin furan.
Haddii aad xallin weydo mushkiladda, ugu yaraan garawshiyo ayaad ka heli doontaa shacabka, waa haddii aad gar leedahay, bulshadana aad la wadaagto.
Waad ogtihiin markii aad idinku ku baaqdeen shir, oo Madaxweynaha aad u yeerteen in uu idiin yimid. Keliya ma aha ee in uu hore u soo waday Wasiirro dhowr ah iyo Hormoodkooda.
Waxba kuma jabna ee waa geesinnimo iyo Soomaalinnimo in aad martiqaad la’aan aad idinku u timaaddaan.
Si gaar ah waxaan Madaxweyne Siciid Cabdullaahi xusuusinayaa, fursadda gaarka ah ee isaga u furan. Madaxda kale hore ayay isugu soo daaleen. Wejiga ugu cusub Madaxweynayaashu waa adiga. Doorasho la isku khilaafsan yahay kuguma soo socoto.
Dowlad Goboleed guun ah oo miisaan siyaasadeed iyo khibrad isku darsatay, dhulkeeduna inta badan badan uu nabad yahay ayaad Madax ka tahay. Nin dhallinyar oo mustaqbal hoggaamineed leh, Puntland iyo ka weynba waad tahay.
Mas’uuliyad gaar ah ayaa kaa saaran xallinta khilaafka. Mas’uuliyad keliya ma aha, haddii aad guul ka soo hoyso, waa dhigaal qofeed oo kuu yaalla Baanka Dhexe ee wanaagga ee Soomaaliya.
Ugu dambeyn, hal Soomaaliya ayaan wada nahay.
Madaxweynayaal, ka quusta in aad ka quusataan wadahadal.
Madaxweynayaal, ka quusta in aad ka quusataan Dowladda.
Waayo mid kale ma lihin.